Kooriyaan Kaabaa Tiraampiin doorsisuu eegalte - BBC News Afaan Oromoo
Kooriyaan Kaabaa Tiraampiin doorsisuu eegalte
16 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa Hooggantoonni lameen Waxabajjii 12 Singaapporitti walarguuf jedhu
Ameerkaan gaaffii gabbisi niwukilaraa akka dhaabbatu gaafachaa turte irratti ni cichiti taanaan marii waliin karoorfatan keessaa akka of baaftu Kooriyaan Kaabaa beeksiste.
Walga'iin Obbo Tiraampii fi Kiim Joongi Uun gidduutti gaafa Waxabajjii 12 geggeeffamu haalaan eegamaa jira.
Garuu Ministirri Dhima Alaa Itti Aanaan Kooriyaa Kaabaa ibsa ofirraa baasaa fi basaasa yaadaa qalbii Ameerikaan irra deddeebiin biyyasaaniirratti geggeessaa jirtu komataniiru.
Ibsi Ministira dhimma alaa kun kan xiyyeeffate gorsaa nageenya biyyaalessaa Ameerkaa Joon Booltan irrattidha.
Obbo Booltan mala ittiin Liibiyaa Niwukilaraan ala godhan Kooriyaa Kaabaarratti akka dhimma itti bahan yaada dhiyeessan. Xiinxaltoonni mala Ameerikaan Liibiyaarratti fayyadamte sana eeruun egereen hooggana Kooriyaa Kaabaa akka kan Liibiyaa akka hin taane qaaccesan.
Kim Kye-gwan ibsa isaanii keessatti ''kun fedhii Ameerikaan ilaa fi ilaameedhaan rakkoo hiikuuf agarsiisaa jirtu natti hin fakkaatu ''jedhan.
"Yaaliin Ameerkaa carraa Liibiyaa fi Iraaqiin mudate nurraan ga'uu akka ta'e nutti mul'ataa jira. Iraaqii fi Liibiyaan sababa biyyasaanii dabarsanii biyyoota aango-qabeeyyiif kennaniif jecha kufaatii hamaa kufan.
Waliin mariif taa'uu Ameerkaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti kan dhufuu danda'e erga Kooriyaan Kaabaa biyyashee niwukilara irraa walaboomsuuf fedhii akka qabdu mul'isteti.
Goodayyaa suuraa Jeettii Kooriyaa Kibbaa F-15K wayita Olompika Gannaa
Qondaaltonni olaanoon Ameerkaa fi Kooriyaa Kaabaa silaa walarganii dhimmoota ji'a darbe keessaa waliin dubbatan gara hojiitti hiikuuf yaadamee ture. Garuu warri kaabaa Ameerkaan yaalii waraanaa Kooriyaa Kibbaa waliin eegaluushee gaafa dhagahan marii kamiyyuu keeessaa of baasuuf murteessan.
Akka yaada Kooriyaa kaabaatti, gochi Ameerkaan raawwachaa jirtu wal shakkii fi sodaa barootaaf ture bakka kan deebisuudha.
Kooriyaa Kaabaa: Ameerikaan biyyoonni addunyaa Kooriyaa Kaabaa waliin michummaa haa dhaaban jette
Tiraampi, mareen Kooriyaa Kaabaa firii dhabnaan dhiisee ba'uun mala jedhan
'Wal-dhabdee Mooyyalee daba siyaasaatu hammeesse'